China High Quality Food ọkwa Electrolytic tinplate mpempe akwụkwọ Nsukka na suppliers - Witop Steel
Home > Ngwaahịa > Mpempe akwụkwọ Tinplate > Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ Electrolytic > Mpempe akwụkwọ nri elektrọnikịkịlị
A na-akpọkwa mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ nri elektrọnikị kọfị, iron dị nchara, nchara dị nchara, na ndebiri Bekee bụ SPTE na ETP. Tinplate na-ezo aka na efere nchara nwere obere carbon ma ọ bụ warara nchara na mkpuchi mkpuchi dị ọcha n'akụkụ abụọ.
Mkpuchi nchara na -arụ ọrụ dị mkpa ma dị mkpa iji gbochie nchara na nchara. Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ nri elektrọnikịkị eletriki nwere ike na ụdị nke nchara, nweekwa nguzogide nchara, ikike ịgbanye gbamgbam na ọmarịcha ọmarịcha tin.
BAO (BAOWU) Steel
Ọkụ na -egbuke egbukeï¼ŒMgbe Nkumeï¼ŒSilver Finishï¼ŒMatte Finish
25-30 ụbọchị mgbe ị natasịrị nkwụnye ego
Mmecha Pụrụ Iche
Emecha nke ọma
A na-enye ihe na-enwu enwu site na mkpuchi mkpuchi na-enwu enwu na nchara nchara dị larịị.
A na-enye elu ahụ na-enwu enwu site na ihe mkpuchi tin na-enwu enwu na-enwupụta na nchara nchara.
A na-enye ihe na-enwu enwu site na mkpuchi mkpuchi na-enwu enwu na nchara nchara siri ike.
Ala na -adịghị mma nke mkpuchi mkpuchi na -adịghị agbaze na ntọala nchara siri ike agwụla.
Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ elektrọnikị kọmpụta nwere njirimara nke nguzogide corrosion, adịghị egbu egbu, ike dị elu na ezigbo ductility.
Dịka ọmụmaatụ, ite kemịkal, ite nri, ite tii na ịwụ mmanụ, wdg.
azu na ihe ubi, wdg.
Mkpọrọ ihe ọveraụgesụ
ihe ọ juiceụ ,ụ, ihe ọ softụ softụ dị nro, ihe ọ otherụ otherụ ndị ọzọ
Mbadamba ọkwa ụlọ ọrụ
mmanụ ụgbọ ala, mmanụ igwe, wdg.
Ogwe ụlọ ọrụ maka agba na mmanụ
ihe ntecha, gas butane, ọgwụ ahụhụ, wdg.
Iwe na ekweghị ekwe & Ngwa
nozzles, spouts, mmechi.
achịcha achịcha, mmechi, ihe na -emighị emi na -emighị emi na akụkụ pụrụ iche.
batrị nwere ike ozu, nwere ike mechie na ahụ, mmechi nnukwu dayameta, okpu eze.
nwere ike mechie na ahụ, okpu okpu na obere mmechi.
Nwere ike mechie na ahụ maka ngwaahịa na -anaghị emebi emebi.
obere dayameta gburugburu nwere ike ozu na nsọtụ.
Anyị nwere asambodo nke ISO90001, SGS na BV iru eru maka mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ nri.
Ihe nchịkọta dị ọkụ: Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ elektrọnikị nri, ndị na -emepụta ya, ndị na -ebubata ya, na -ere, na -azụ, zụrụ, ụlọ ọrụ, ahaziri ya, na ngwaahịa, nnukwu, nlele efu, China, emere na China, ọkọnọ, ọnụ ala, ọnụ ala, ọnụ ahịa dị ala, zụta ego, ọnụ ahịa, ndepụta ọnụahịa, nkwupụta , SGS, BV, Kacha ọhụrụ, Ogo, na -adigide, akwụkwọ ikike afọ iri
SPCC Mr GradeTin mkpuchi mkpuchi mpempe akwụkwọ elektrọnik
Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ T3 T4 SPTE maka ite